Wakiilka Dowlad Goboleedka Galmudug ee Waqooyiga Amerika Eng. Mohamud Duale Kahie oo Hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee la doortay Dr. Hassan Shiekh Mohamud | HobyoNet.Com
Wakiilka Dowlad Goboleedka Galmudug ee Waqooyiga Amerika Eng. Mohamud Duale Kahie oo Hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee la doortay Dr. Hassan Shiekh Mohamud
NB Waxaan soo diyaarin wax qabadka Guud ee uu qabtay Eng. Mohamud Duale Kahie Waqtigii uu hayay xilkaan & iyo kahor aas aaskii Galmudug HobyoNet.Com waxay ka turjumaysaa Media dhabta ah ee reer Galmudug iyada oo aan xanbaar saneen shaqsi & koox Kana gaabsata Mar walba wixii keeni karo isku dhac iyo kala fogeen bulshada somaliyeed gaar ahaan dadka reer Galmudug.
Waxaan soo gudbin doonaa taariiqda dhabta ah ee Galmudug iyada oo aan mudo indhaha ka qarsanaynay Habdhaqanka warbaahinta qaar iyo been abuurka taariiqeed,